बालबालिका , युवा र बृद्ध सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्दै धुलिखेल जिपलाइन - ParyatanBazar.com
जिपलाईन केहि बर्ष अघि सम्म नेपालीहरूको लागि बिल्कुलै नयाँ नाम थियो। जब भर्खर भर्खर नेपाली बजारमा जिप लाइनले प्रवेश गर्यो , त्यसले धेरैमा उत्सुकता पनि जगायो तर खेल्न पोखरा नै पुग्नु पर्ने बाध्यता रहन्थ्यो। अर्को समस्या चाहिँ जिपलाईनको चार्ज नै महँगो !
नेपालीहरु सानै देखि साहसिक वातावरणमा हुर्किएका , कहिले घना जङ्गलबिचको घाँस दाउरा , कहिले तुइनको सहारामा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता त कहिले ठुलो खोला कुनै नाउँ र पुल बिनै तर्नुपर्ने समस्या ! यिनै समस्यालाई पर सार्दै विकास तर्फ उन्मुख हामी पुन त्यही साहसिक यात्रा तर्फ फर्कने इच्छामा छौँ।
र त्यही इच्छा नेपाल मै पुरा गर्ने त्यो पनि काठमाडौँ नजिक नै पुरा गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ वल्ड वाइड एड्भेन्चर प्रा लि ले।काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–८ र पाँचखाल नगरपालिका–५ को सिमानामा पर्ने ‘वल्र्डवाइड एड्भेञ्चर प्रालि’का संचालक हुन् सिन्धुपाल्चोकका केदार थापा र काठमाडौका भुपेश श्रेष्ठ। जसले सपना देखे हामीलाई डोरी कै भरमा एक डाँडा बाट अर्को डाँडामा पुर्‍याउने र भरपुर मनोरञ्जन दिने।
काठमाडौको कोटेश्वरबाट ३३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यस जिपलाइनमा टेक अफ (थाक्ले डाँडा, धुलिखेल) बाट हुन्छ भने ल्यान्डिङ स्टेसन (खावा, पाँचखाल)मा हुन्छ।
२०१९ फेब्रुअरी १४ देखि ब्यवसायिक सन्चालनमा आएको जिपलाइनले पछिल्लो समय युवालाइ मात्र होइन , बालबालिका र बृद्धलाई पनि आकर्षण गर्न थालेको छ। ११ सय मीटरको दुरी कति छिट्टै पार गरियो पत्तै भएन पहिलो पटक टेन्डम (जोडी) खेल खेल्नु भएका ६८ बर्षिय आमा फुलमाया तामाङ र ६५ बर्षिय कान्छी तामाङलाई ।
“छोराले खेल्नु भनेर भन्यो ,घर छेउमै जिपलाइन सुरु भएको पनि २ बर्ष हुनलाग्यो ,संधै अरु डोरीमा उडेको देख्दा उड्न मन नलागेको त् होइन तर हिम्मत भने आइहालेको थिएन “फुलमायाले बताउनुभयो।
सुरुमा त सारै डर लागेको थियो तर खेल्दै गएपछि रमाइलो लागेको कान्छी ले बताउनुभयो। भर्खर रमाइलो हुँदै थियो ओर्लिने बेला पो भइसकेछ। फेरी गर्न मन छ , कहिले पो जुर्ने हो ? उहाँले भन्नुभयो।
पौने ५ करोडको लागतमा निर्माण भएको साहसिक खेल ‘जिपलाइन’ का लागि नेपाली नागरिकले प्रतिव्यक्ति क्लासिकमा रू. २ हजार ५ सय, सुपरम्यानको ३ हजार ५ सय र जोडीको लागि ४ हजार5सय शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्क र अन्य मूलुकको हकमा ३५ देखि ४० डलर शुल्क तोकिएको छ ।
. सबै उमेर समूहका व्यक्तिले खेल्न सकिने सो खेल दिनको ६० जनासम्मले खेल्न सक्छन।
साहसिक खेल ‘जिपलाइन’ नेपाली पर्यटन बजारको क्षेत्रमा नितान्त नयाँ र फरक उत्पादन पनि हो ,यसमा खेलिने सुपर म्यान खेल र जोडीले गर्ने खेल भने धुलिखेल जिपलाईनले नेपालमा पहिलो पटक भित्र्याएको हो। ।
खुलेको मौसममा त जिपलाइन खेल्दा खेल्दै सुन्दर हरियाली , हावासंगै लाङटाङ, दोर्जेलाक्पा, फूर्बीच्याचू लगायताका हिमालको दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिन्छ। समुन्द्र सतहदेखि १३ सय मिटर उचाइबाट शुरु भएर ‘भर्टिकल ड्रप’ दुई सय ४० फिट हुँदै १२ सय मिटरको उचाईमा पुग्दा खेलाडीले भरपुर आनन्दको महशुस गर्दछन ।
‘ल्यान्डिङ स्टेसन’मा करीब करिब २० रोपनी क्षेत्रफलमा ८ फरक एडभेन्चर कोर्स सहित एडभेन्चर पार्क समेत निर्माण गरिएको छ जहाँ बेबि जिपलाइन, भी सेप ब्रीज, टायर ब्रीज, प्लेइङ ब्रीज, ब्रह्मा ब्रीज, हाइ रोप लगायतका खेलहरु खेल्न सकिन्छ।
विशेष प्रकारको डोरीसहितको फुलबडी हार्नेस, घिर्नी र डोरीहरुको सहायताले डोरीको सहायताको खेलिने यस खेलका लागी कम्पनीले खेलाडीको विमा पनि गर्ने गर्दछ । अमेरिकन र क्यानेडियन प्रविधिको गुणस्तरीय सामग्री प्रयोगद्वारा निर्मित जिपलाइन खेलमा नेपाल सरकारको नियमानुसार ५ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरिएको छ ।